विषादीयुक्त फलफुल तथा तरकारीबाट कसरी बच्ने ? जान्नुहाेस् यस्ता छन् बच्ने उपाय - ज्ञानविज्ञान
फलफूल तथा तरकारीमा विषादी सजिलै छुट्याउन त गाह्रो हुन्छ । यसको मापन गर्न यन्त्र उपकरणको आवश्यकता पर्छ ।तर पनि तरकारी तथा फलफूल किन्दा केही सावधानी अपनाएको खण्डमा विषादीबाट बच्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि हेर्दा तरकारी तथा फलफूल एकदमै चिल्लो देखिन्छ, त्यसलाई बहिस्कार गर्ने ।
– ओइलिएको जस्तो या किरा फट्याङग्राले खाएको जस्तो किन्ने ।
– खोट नभएको भन्दा पनि कतै खोट भएको किन्ने ।
– सागपातमा प्वाल परेको जस्तो किन्ने ।
विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलले तत्काल गर्ने असर
– वाकवाकी र रिँगटा लाग्ने ।
– ज्वरो आउने तथा पूरै शरीरमा डाबर देखिने ।
– फोक्सो, मुटु, मृगौला तथा दिमागमा असर गर्ने ।
– सुगर तथा प्रेसरको रोग निम्त्याउने ।
– क्यान्सरको सम्भावना बढी हुने ।
– गर्भवती महिलामा समस्या ल्याउने ।
– बालबालिका अपाङ्ग वा सुस्त मनस्थितिका शिशु जन्मिने खतरा बढ्ने ।
– बाँझोपनको समस्या देखा पर्ने ।
फलफूल र तरकारीमा रहेको विषादीबाट बच्ने उपाय
– सकभर मौसमअनुसार फल्ने फलफूल र तरकारीको मात्र सेवन गर्नुपर्छ ।
– अर्गानिक र ताजा फलफूल र तरकारी किन्नुपर्छ ।
– विषादीजन्य खाद्यान्नलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी भान्सामा नै भित्रिएको अवस्थामा
– सामान्य तरिका भनेको राम्ररी धुने, पखाल्ने नै हो । तर धोइपखाली गर्दासमेत विषादी नजान सक्छ, त्यसैले अधिक मात्रामा रहेको विषादी हटाउन नुनपानीको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– यदि नुन पनि नराख्ने हो भने सफा पानीमा रातभर भिजाउने र बिहान राम्रोसँग पखाल्ने गर्यो भने धेरै हदसम्म बाहिरी भागमा रहेको विषादी जान्छ । उपभोक्ता आफैँ सचेत भइ आफ्नो स्वास्थ्यका लागि विषादीमुक्त फलफूल र तरकारी खानु पर्दछ ।
तरकारी र खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापन प्रणालीमा सुधार गर्ने पनि निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिपत्रमा जनाइएको छ । हाल विदेशबाट आयात तथा प्रयोग हुने तरकारी र खाद्य पदार्थमा के कति विषादीको प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारेमा यकिन विवरण छैन ।
नेपालमा तरकारी र खाद्य पदार्थको आयात बढी मात्रामा छिमेकी भारतबाट हुने गरेको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि, गृह, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनबमोजिम आफूहरुले नियन्त्रणका उपायका लागि आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सोबारे थप काम अघि बढाउन मन्त्रालयको योजना महाशाखाले आउदो आइतबार सम्बन्ध निकायका पदाधिकारीको बैठक तय गरेको बताउनुभयो ।सो निर्णय कार्यान्वयको प्रगतिबारे हरेक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा समीक्षा बैठक आयोजना हुनेछ ।
झापा – भारतबाट नेपाल भित्रिरहेको तरकारीमा विषादी मात्रा अत्यधिक फेला परे पनि किनबेचमा रोक लगाउन कोही पनि अग्रसर भएका छैनन् । सीमा नाकाबाट परीक्षण बेगरै नेपाल भित्रिरहेको तरकारी बजारमा पुगेपछि परीक्षण गर्दा अधिकांशमा अत्यधिक विषादीको मात्रा भेटिएको छ।
मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक ठहर भइसकेका तरकारी किनबेच भने निर्वाध चलिरहेको छ । बिर्तामोडस्थित कृषि उपज बजारको विषादी परीक्षण केन्द्रमा जाँच गरिने तरकारीमा विषादीको मात्रा अत्यधिक फेला पर्दै आएको छ ।
भारतबाट ल्याइएका तरकारीमा मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने विषादी भेटिने गरेको जानकारी ल्याबमा कार्यरत प्राविधिक सुष्मा खड्का बुढाथोकीले दिइन्।
उनका अनुसार सामान्यतया कुनै पनि तरकारीमा विषादीको मात्रा ४५ प्रतिशतभन्दा कम भएमात्रै खानयोग्य मानिन्छ ।
‘तर, यहाँ जाँच गरिने अधिकांश तरकारीमा विषादीको मात्रा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पाइन्छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार कृषि उपज बजारस्थलमा आइपुग्ने भारतीय तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी पाइने गरेको छ।
केही वर्षअघि राजधानीको तरकारी बजारमा परीक्षणक्रममा विषादीयुक्त तरकारी धेरै भेटिँदा सीमा नाकामा परीक्षण केन्द्र राख्नुपर्ने आबाज चर्किएको थियो । तर, त्यो घटनाको तरंग सेलाउँदै जाँदा यस्तो आवाज उठाउनेको स्वर पनि मत्थर हुँदै गयो । नाकामा अहिलेसम्म परीक्षणको प्रबन्ध भएको छैन ।
काँकडभिट्टा नाकामा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा प्रयोगशाला त छ तर त्यसले तरकारीमा रोग भए–नभएको मात्रै जाँच गर्छ । ‘हामी रोगमात्रै जाँच गर्छौ, विषादी जाँच्ने उपकरण छैन,’ कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रप्रसाद साहले भने, ‘त्यसैले विषादीबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन।’
नाकामा परीक्षण केन्द्र नराखेर लाचारी देखाइरहेको सरकारले अरुले राखिदिएको प्रयोगशालाको उपयोग पनि राम्ररी गरेको छैन । १० महिनाअघि प्याग नामक संस्थाले बिर्तामोडमा राखिदिएको विषादी परीक्षण प्रयोगशालामा जाँच त हुन्छ तर त्यसको रिपोर्टअनुसार काम केही हुँदैन ।
‘हामीले जाँचेको तरकारीमा देखिएको विषादीको मात्राअनुसार त्यो खान नमिल्ने देखिन्छ,’ कृषि उपजका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, बजारभरि तिनै तरकारीको राज छ । कसले रोक्ने, कसले छेक्ने?’
नेपालमा उत्पादितभन्दा भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलमा अत्यधिक विषादी भेटिने गरेको बुढाथोकीले बताइन् । उनका अनुसार भारतबाट आउने तरकारी र फलफूल क्वारेन्टाइनमा जाँच हुनुपर्ने हो तर, अधिकांश वस्तु बिनाजाँच आइरहेका छन् ।
कृषि उपजस्थल बिर्तामोडको तथ्यांक शाखाकी कर्मचारी माया राजवंशीका अनुसार अहिले तरकारी ५० प्रतिशतसम्म र फलफूल ८० प्रतिशतसम्म आयात हुन्छ ।
आलु, प्याज, सिमी, गोलभेडा, काउली, ब्रो काउली, भन्टालगायत तरकारी भारतबाट आउने गरेको राजवंशीले बताइन् । बिर्तामोड बजारमा मात्रै होइन, पूर्वका अधिकांश बजारमा भारतीय उत्पादनकै उपस्थिति बढी छ । उपभोक्ताको भान्सामा विषादीयुक्त तरकारी पाकिरहेको छ।
नेपालको अदुवामा विषादी भेटिएको दाबी गर्दै भारतले निर्यातमा दुई वर्षअघि लामो समय प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला विषादी फेला परेन । त्यसपछि पनि अनेक बहानामा अवरोध निरन्तर छ । तर, अत्यधिक विषादी रहेको भनेर यसअघि नै प्रमाणित भइसकेको भारतीय तरकारी तथा माछामासु भने परीक्षणबेगरै नेपाल भित्रिन्छ ।
मसलामा प्रयोग हुने अदुवामा भारतले उच्च सजगता देखाइरहँदा दिनहुँ नेपाली उपभोक्ताको भान्सामा भित्रिने तरकारीमा भने विषादी छ–छैन भनेर जाँच्ने उपकरणसमेत नाकामा छैन । ‘यो आफ्ना नागरिकप्रति सरकारले देखाएको चरम बेवास्ता हो,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी सन्तोष न्यौपाने भन्छन्, ‘यस्तो बेवास्ताले बजारमा विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल किनबेच खुला जस्तै भएको छ।’
सरकारी लाचारी कति उच्च छ भने प्रमुख नाकामा भारतबाट आउने खाद्यवस्तु जाँच्ने प्रविधि र जनशक्ति दुवै छैन । त्यसैले माछा, तरकारी हेरेर, छामेर र सुँघेरै खानयोग्य भनिदिने चलन दशकौंदेखि जारी छ । काँकडभिट्टा नाकाबाट मात्रै वार्षिक सरदर ७० हजार मेट्रिक टन हाराहारीमा तरकारी नेपाल भित्रिन्छ ।
माछा पनि ठूलो परिमाणमा भित्रिन्छ । तर, ती कुनैको पनि विश्वसनीय परीक्षण हुँदैन । ती हेरेर, छामेर र सुँघेरै बजार हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छन् । हरियो तरकारीमा देखिएको लापरबाही माछामासुमा पनि उत्तिकै छ । एनिमल क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकडभिट्टामा आयातित मासुजन्य वस्तु जाँच गर्ने प्रयोगशाला छैन।
स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार बनेका झापाका अधिकांश नेताले आफ्नो गाउँ÷नगरलाई विषादीमुक्त बनाउने घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका थिए । बिर्तामोड, मेचीनगर, दमक र भद्रपुरजस्ता ठूला नगरमा चुनाव जितेका दलका नेताहरुको घोषणापत्रमा विषादी मुद्दा मुख्य प्राथमिकतामा छ ।
तर, उनीहरु कति बेपर्वाह छन् भने विषादी प्रमाणित तरकारी बेचबिखन रोक्नेतर्फसमेत ध्यान दिन सकेका छैनन् ।परीक्षण रिपोर्टले खान अयोग्य प्रमाणित तरकारी खुलेआम बिक्री भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार रमिते मात्रै बनेको छ । त्यस्ता तरकारी र फलफूल बिक्री वितरणमा रोक लगाउन कोही अग्रसर छैन ।
बिर्तामोड नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनका अनुसार यो वर्ष अर्गानिक खेती गर्न भन्दै तीन करोड रुपैयाँ नगरबाट विनियोजन भएको छ । तर, विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरणमा रोक लगाउने कुनै योजना भने बनेको छैन।
Don't Miss it आँखामा डार्क सर्कल आएर हैरान हुनुहुन्छ ? याे तरिका अनुसार काेलगेट लगाउनुहाेस्
Up Next जान्नुहाेस् बच्चाकाे ओठमा चुम्बन गर्दा बच्चाकाे स्वास्थ्यमा आउन सक्छ यस्ताे समस्या